Xildhibaan Mahad Salaad “Laguma Qanci Karo Jawaabtii Dowlada Ka Bixisay Musiibadii Xarunta G/Banaadir” -
HomeWararkaXildhibaan Mahad Salaad “Laguma Qanci Karo Jawaabtii Dowlada Ka Bixisay Musiibadii Xarunta G/Banaadir”
Xildhibaan Mahad Salaad “Laguma Qanci Karo Jawaabtii Dowlada Ka Bixisay Musiibadii Xarunta G/Banaadir”
Falcelno kala duwan ayaa laga keenay warbixintii shalay Wasaaradda Amniga ka soo saartay kiiska Baaritaanka qaraxii 24-kii bishii July ka dhacay xarunta Gobolka Banaadir.
Warbixinta Wasaaradda Amniga oo lagu sheegay mid hordhac ah ayaa lagu tilmaamay mid aan nuxur laheyn oo aan dhameystirneyn, isla markaana aanay ka jawaabeyn su’aalo muhiim ah.
Xildhibaan Mahad Maxamed Salaad oo ka tirsan Baarlamaanka Federaalka ayaa sheegay in loo baahan yahay in la sameeyo gudi madax banaan oo khibrad iyo aqoon lagu soo xulay, isla markaana baaritaano tifaftirana soo sameeya, si looga gungaaro xaqiiqada dhabta ah ee masiibadii ka dhacday xarunta gobolka Banaadir.
Qofka meesha isku qarxiyay oo aan la shaacin magaciisa, shaqada uu hayay, sida uu uga soo gudbay goobaha baarista isagoo sita walxaha qarxa ee sidaas u weyn iyo sida uu ku soo galay goobta shirka?
Saraakiishii ku fashilmay ilaalinta amniga xarunta gobolka Banaadir sidee loogu aaminay in ay qayb ka noqdaan gudigii baaritaanada sameynayay?
Waa suaalo aad u adag una Baahan in laga Qanciyo Bulshada Somaliyeed.